Nitondra Downlight, nitondra Down Light, Dimmable Downlight - Radiant
Miramirana downlight an-trano ny olona miahy ny fiainana ao amin'ny manodidina sy ny firenena samy hafa. Afo laharana downlight mahatonga velona azo antoka kokoa. Jery ​​mitongilana sy miova zoro andry fametrahana downlight hanome fifantohana jiro ho amin'ny lalana marina. IP65 downlight dia afaka hisakana ny rano sy ny hamandoana ambony fidirana. RA avo sy ny Cri ho velona kokoa ny tena. Low Mamirapiratra mankarary maso izany hazavana mahatonga ny mazava salama. Antonony vola sy mora manao ny volavolan-dalàna wiring kely.
CCT sy Bezel azo ampifamadihina
IP65 & Jery mitongilana
Screwless & LOP IN / OUT fifandraisana
Tara miova Angle Setting amin'ny jiro iray
CCT fiovana + Dim hamindroana mametraka amin'ny jiro iray
Hijery ny More ...
Miramirana ara-barotra downlight latsaka roa tandavan hihaona tsena samihafa ilaina - ny teti-bola sy ny Praiminisitra. Ireo no designable Fittings fanoloana CFL sy PL fahazavana. Noho ny jiro lava ny fotoana sy ny faritra manokana ampiasaina, Radiant downlight ara-barotra manome 5 taona fiantohana, ary manolotra asa miova kokoa ny safidy amin'ny jiro iray. Optic hafa koa dia afaka manolotra safidy maro ny mpampiasa safidy mazava sehatra nanaovana.
CCT miovaova in iray jiro
Multi optic safidy (relector + family + diffusers)
Triac, Dali & 1-10v dimming safidy
Miramirana mahay mifehy downlight dia mampiasa Bluetooth APP alalan'ny teknolojia. Mba hampitony ny olona manahirana mampanahy ny fanaraha-maso na ny tsy hita telefaonina, manda isika Switch to mitovy. Ny mahatonga ny teknolojia farany downlight mahay mifanaraka kokoa amin'ny rafitra hafa. Ankoatra ny fanaraha-maso, ny mahery miasa ny jiro dia zavaboary. Tsy manana hazavana sy ny tara-pahazavam lehibe hazavana fotsy sy RGB izay mety ho an'ny fampiharana samihafa. Amin'ny Radiant downlight manan-tsaina, dia ho vitanao ny jiro fitoriana ny toe-po na oviana na oviana ary na aiza amin'ny mikasika ny an-tariby.
Mahaleo tena fahazavana sy tena mazava Tazana fanaraha-maso
Full loko sy ny fanaraha-maso ny famirapiratry ny mazava
Saropady mikasika facia
Wireless Bluetooth nidika ho amin'ny mazava vondrona
Mifanaraka amin'ny D1 & C1 vokatra in mifangaro fametrahana
Ny Radiant Lighting matihanina famolavolana sy ny injeniera ekipa afaka mamorona vokatra namboarina izay hahafahan'ny mpanjifa mba manavaka avy amin'ny mpifaninana sy hanatratra sanda ambony indrindra eo amin'ny tsena eo an-toerana. Ny multi-lingual mpanjifa asa araka ny marina mpitantana hahatakatra ny fepetra takiana rehetra mpanjifa sy ny fanompoana mitondra orinasa manome fitsipika teo aloha, mandritra ary aorian'ny fifanarahana tanteraka.
Specialist ODM Supplier ny LED Downlight Products
Adiresy: Jiatai West Road, Fenghuang Town, Zhangjiagang, Jiang su, Sina